घरायसी समान किन्न भारत जान छोडे नेपाली, भन्छन्- अब त नेपालमै किन्ने हो भारत त खुले पनि गइदैन ! « गोर्खाली खबर डटकम
घरायसी समान किन्न भारत जान छोडे नेपाली, भन्छन्- अब त नेपालमै किन्ने हो भारत त खुले पनि गइदैन !
बाँके – बाँकेको नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार रुपैडिहा अहिले सुनसान छ । को’रोना भाइरस कोभिड–१९ महामाारी पछि नेपाली उपभोक्ताको उपस्थिति नहुँदा भारतीय बजार रुपैडिहा सुनसान बनेको हो। नेपालगञ्ज–१० का गणेश शर्मा भन्नु हुन्छ, “कोरोना महामारीको आमनेपाली उपभोक्तालाई फाइदा पनि भएको छ । यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भर र स्वदेशी वस्तुको गुणवत्ता चिन्ने अवसर पनि दिएको छ ।”
रुपैडिहा बजारमा अहिले नेपालीहरुको प्रवेश शून्य प्रायः छ। आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीको ओखती खरिदका लागिमात्र नेपालीहरुलाई रुपैडिहा प्रवेशको अनुमति दिने गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले बताउनुभयो । नून, तेलसमेत किन्न भारतीय बजार जान लालायित हुने नेपाली उपभोक्तालाई कोरोना महामारीले स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्न पनि सिकाएको नेपालगञ्जका व्यापारी देवीप्रसाद पौडेलको अनुभव छ ।
सामान्य अवस्थामा बाँकेका हजारौँ उपभोक्ताले दिनहँु रुपैडिहा बजारबाट घरायसी र व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान खरिद गर्न जाने अवस्थाको अन्त्य कोरोनाको महामारीले गरेको छ। अर्कोतर्पm, बन्दा बन्दीको झण्डै एक महिनाअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि यहाँका उपभोक्तालाई सहज बनाएको छ भने रुपैडिहा प्रतिको मोह पनि धेरै घटाएको पाइन्छ ।
“रुपैडिहा बजारभन्दा भाटभटेनीमै सस्तो पाइँदो रहेछ, फेरि जे खोज्यो त्यही सामान एकै ठाउँमा पाउने भएपछि अब सीमापारि गइरहनु नै परेन्”, नेपालगञ्जकी गृहिणी आरती थापाको भनाइ छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्य भन्नुहुन्छ, “बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान रुपैडिहाभन्दा नेपालगञ्जका बजारमा अझ सस्तो पाइन्छ, भारतीय उत्पादन पनि हामीले थोकमा ल्याएर यहाँ बिक्री गर्दा रुपैडिहाभन्दा यही सस्तो पर्न जान्छ ।”
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, कोरोना महामारी पछिको भारतीय सीमानाका बन्द हुँदा रुपैडिहा बजारमा व्यय हुने करीब रु पाँच करोड रकम स्वदेशमै खर्च भएको छ । यसैगरी, चर्को घाम तथा समयको बर्बादी, रिक्सा, टाँगा र माइ क्रोबसमा काँचिएर, कस्टम र एसएसबीको हेपाइ सहनुपर्ने नियतिको पनि अन्त्य भएको बौद्धिक उपभोक्ताहरुको बुझाइ छ ।
४ बर्षिय बालिकालाई २४ वर्षीया युवकले गरे क रणी, बालिका अस्पतालमा भर्ना